Miyuu Ronaldo Ka Baxay Tartankii Uu Kula Jiray Lionel Messi? – Xog Si Buuxda U Kala Saartay Labada Laacib - Gool24.Net
Miyuu Ronaldo Ka Baxay Tartankii Uu Kula Jiray Lionel Messi? – Xog Si Buuxda U Kala Saartay Labada Laacib
December 6, 2019 Abdiwahab A. Abeye
Sannado badan oo ay dunida usoo talinayeen, rikoodho ay iska beddelayeen oo ay dhigayeen iyo xifaaltan aan joogsi lahayn oo ay soo qaateen kaddib, Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo waxay u kala guureen laba horyaal, taaas oo yaraysay hirdankoodii shaqsiga ahaa.
Laacibka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa sannadkii hore qaatay khatar ah inuu u guuro horyaal cusub oo uu ka samayn karo bandhig fiican, waxaanu doortay Juventus oo uu ugu wareegay lacagtii ugu qaalisanayd ee ciyaartoy 34 jir ah ay koox ku iibsato. Laakiin Lionel Messi oo aan waligii u ciyaarin koox kale, ayaa sii xajisanaya booskiisa Barcelona oo uu u yahay tiir-dhexaadka, hoggaamiyaha iyo laacibka ay guusha ka sugto.
Horyaalka waddanka Spain ee LaLiga iyo midka Talyaaniga ee Serie A, waxay waqtigan leeyihiin qiimayn kala dduwan, iyadoo ciyaartoyga ka ciyaara waddanka Talyaaniga aanay sannado badan ku guuleysanin xiddig adduun, halka Spain ay horyaalkiisa ka ciyaarayeen xiddigihii ku guuleystay Ballon d’Or tobankii sannadood ee ugu dambeeyey.
Barcelona oo uu hormood u yahay Lionel Messi waxay hoggaanka u haysaa horyaaalka LaLiga, laakiin Juventus waxay hal dhibic ka hoosaysaa Inter Milan.
Haddaba waa sidee xogta bandhigga labada ciyaartoy ee xili-ciyaareedkan, midkee ayaa se wax-qabad fiican?
Wuxuu kooxdiisa Juventus u saftay 11 kulan oo horyaalka Serie A xili ciyaareedkan socda, waxaanu u dhaliyey 6 gool iyo hal gool oo kale oo uu caawiye ka noqday. Ciyaar kasta waxa uu awood u yeeshay inuu goolka toogto 6 jeer, iyadoo kubbad dhiibistiisuna ahayd 80.7%, halka qiimaynta kubbadaha sare ee uu madaxa la helayna ay ahayd 1.6 kulan kasta.
Tartanka Champions League oo ahaa midka uu xoogga saari jiray Ronaldo, goolasha ugu badan iyo bandhiggiisa ugu fiicanna ka samayn jiray, waxa uu saftay shan ciyaarood fasal ciyaareedka, laakiin waxaanu dhaliyey hal gool oo kaliya, iyadoo bandhiggiisana lagu qiimeeyey 7.55 celcelis ahaan.
Sagaal ciyaarood oo LaLiga ah oo uu Lionel Messi u ciyaaray Barcelona, waxa uu dhaliyey sagaal gool, waxaanu caawiyey shan gool oo kale oo ay asxaabtiisu dhaliyeen.
Qiimayntiisa celceliska ah ee kulan kasta, Messi waxa uu goolka toogtaa 3.6 kulan kasta, waxaanu sameeyey kubbad-dhiibis 80.6%, halka kubbadaha sarena uu 0.3 celcelis ahaan kulan kasta madax ku dhuftay.
Shan ciyaarood oo tartanka Champions League ah oo uu saftay, xiddiga reer Argentine waxa uu kooxdiisa u dhaliyey laba gool iyo saddex caawimood, iyadoo qiimayntiisa celceliska ah ay ahayd 8.61.
Marka xogtan laga duulo, waxay u muuqataa in Cristiano Ronaldo uu si buuxda uga baxayo tartankii muddada dheer uu kula jiray Lionel Messi, waxaana taas sii xoojinaysa in laacibka reer Argentine uu haddaba dhaafay rikoodhkii abaal-marinta Ballon d’Or oo uu mar lixaad ku guuleystay, halka uu CR7 ku hadhay shan jeer.